Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Kanada waxay bixinaysaa goobo cusub oo gooni-gooni ah oo ka yimid COVID-19
Si kastaba ha ahaatee, dadka qaar ee Kanada, xaaladaha guryeynta ee ciriiriga ah iyo kharashyada sare waxay ka dhigi karaan ammaan darro ama aan macquul ahayn in la go'doomiyo, naftooda, qoysaskooda iyo bulshooyinkooda geliya khatar iyaga oo aan dembi lahayn.
Maanta, Mudane Jean-Yves Duclos, Wasiirka Caafimaadka, ayaa ku dhawaaqay in ka badan $5 milyan si loogu taageero labada mashruuc ee soo socda ee British Columbia, iyada oo loo marayo Barnaamijka Go'doominta Iskaa wax u qabso ee Badbaadada ah ee Dowladda Kanada:
• Barnaamij lacag celin ah oo ku salaysan loo-shaqeeyaha oo loogu talagalay shaqaalaha beeralayda ee ku nool kana shaqeeya guud ahaan British Columbia iyada oo loo sii marayo Dowladda Columbia ee Wasaaradda Beeraha, Cuntada iyo Kalluumeysiga si ay u caawiso taageerada baahida go'doominta shaqaalaha beeralayda; iyo
• goob go'doon tabaruc ah oo badbaado leh oo ku taal Magaalada Surrey iyada oo loo sii marayo Maamulka Caafimaadka Fraser.
Goobaha gooni-goonida ee tabaruca ah waxay caawiyaan dadka qaba COVID-19-ama la soo deristay - inay galaan meelo gooni ah oo badbaado leh si ay naftooda iyo bulshadoodaba u badbaadiyaan. Goobahani waxa ay dheer yihiin tas-hiilaadka ay heli karaan dadka ay haysato hoy la'aanta kuwaas oo u baahan in la karantiilo sababtoo ah baaritaan togan.
Goobaha go'doominta iskaa wax u qabso ah waxay yareeyaan halista faafitaanka fayraska dhexdooda xiriirka qoyska marka ay dadku la kulmaan guryo ciriiri ah oo aysan haysan beddel kale. Goobahan ayaa ah mid ka mid ah aaladaha jawaabta degdega ah ee loo aasaasay si loo joojiyo fiditaanka COVID-19, waxaana la geyn karaa bulshooyinka ay wajahayaan cudurrada dillaaca.
Barnaamujka Go'doominta Iskaa-wax-u-qabso ee Badbaadada ah wuxuu si toos ah u taageeraa magaalooyinka, degmooyinka iyo gobollada caafimaadka ee khatarta ugu jira gudbinta bulshada ee COVID-19. Goobaha lagu doortay barnaamijka ayaa bixiya meel la heli karo oo dadku ay si badbaado leh isu karantiilaan muddada loo baahan yahay. Saraakiisha caafimaadka dadwaynaha maxalliga ah ayaa go'aamiya dadka u qalma kuwaas oo la siin karo ikhtiyaarka ah inay u wareegaan goobta go'doominta si ikhtiyaari ah si ay iyaga iyo xiriirkooda qoyskooda u badbaadiyaan inta uu ka dillaacay bulshadooda.